Ogaden News Agency (ONA) – Doorashadii OYSU Seattle oy ku Guulaysatay Hinda Maxamud
Doorashadii OYSU Seattle oy ku Guulaysatay Hinda Maxamud
Posted by ONA Admin	/ September 28, 2014
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya OYSU oo ah mid ka hawgala dal iyo dibadba, ayaa dalka dabadiisa wuxuu kuleyahay in kabadan 40 lamood. Laan walba oo ururka ka tisan waxay leedahay Xoghaye iyo maamul guddi ah oo hogaamisa faracaa si’ay ugu suurta gasho fulinta shaqa malmeedka horyaala ururka. Xoghaya yaasha iyo maamuladuba waxay ku yimadan nidaam doorasho oo laqabto sanadkiiba halmar kaaso xubnuhu kuso doortan xubinka ay u arkaan inuu sanadkan halganka iyo ururkaba hormar gadhsiin kara. Xubinkaaso laguso dooranayo karti, aqoon, dadaal, firfircoodi iyo waaya aragnimo.
Sidaas daradeed, waxaa maanta oo Sabti ah tariikhduna ayku aadantahay September /27/2014 kadhacay magaalada Seattle, Washington ee carriga Maraykanka doorashadi Xoghayaha OYSU Seattle oo sanad kiiba halmar laqabto. Doorashadan ayaa ahayd mid in mudda ah xubnaha ururku ay u shin tirinayeen.
Waxa laba todobaad kohor lasoo xulay guddi doorasho si’ay doorashadu unnoqoto mid midha dhal ah oo waafaqsan xeerka iyo nidaamka uyaala ururwaynaha OYSU. Guddiga ayaa wakhti iyo dadaal badan galiyay qaban qaabada dorashada iyagoo isla markaana xil iska saaraya hawshas balaadhan ayay soo iclaamiyeen maalinki, goobtii iyo saacadii doorashadu dhicilahayd intaba. Sidokale waxay soo xuleen Saddexdii xubnood ee sanadki lasoo dhaafay oogu firfirconayd ooguna wax qabadka badnayd. Saddexdaas xubnood ayaa kala ahaa Hinda Maxamuud Sheekh Cabdi, Faysal Ibraahin Iyo Cabdullaahi Xassan.
Maalinki dorashada ee lasugayay maalmahanba oo maanta ku aadanayd ayaa hoolka dorashada waxa isugu yimid xubnihii jaaliyada Seattle. Waxa shirka furay gudomiyihi guddiga dorasha oo kuso dhaweyay shekh Faysal si’uu aayada quraan ah oogu furo kulanka. sidokale waxay guddigu siwada jira u sharxeen xeerka dorashada. intaas kadib waxaa laguda galay doorashadii oo lagu codaynayay waraaq iyo sanduuq (box) taaso qofna uusan ogayn qofka kale wuxu u codaynayo. Kadib marki ay dhamaatay codaynti ayay gudigu waxay tiriyeen codadkii xubnaha. Waxaana cod qaalib ah ku gulaysatay HINDA MAXAMUUD SHEEKH CABDI oo maanta laga bilaabo taniyo sanadka danbe hogaanka uhayn doonta OYSU Seattle haddu Allaha awoodali lihi karaali noqodo.
Doorashada oo ahayd mid si dimoqraadi ah udhacday aya guul kuso gaba gabowday. Halkaaso dad farabadan oon ururka aqoon hore ulahayna ay kunoqotay lama filaan sida nidaamsan ey hawshu udhacday dadkuna oogu qanceen dorashada. Iyago halkas kasheegay inaysan wali arkin dhalin somaliyeed oo sidan oo kale unidaamsan. Iyago kudhiiri galiyay ladhinyarta inay tusaale unoqdaan ummada somaliyeed.
jwxo abdi husien says:
asc dha maan dhalin oysu waan idin salamaya dha maan tii walaalayaaaaaaaaaaaa waxaan jeclahay in aan han balyo udiro hinda maxamudd shekh oo hugaamin doon ta dhalin oysu sanadaka nagu soo wajahan waxaan leeyahay hin daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay ilah kakula garab galo xilkaaaaaaaaaaaa aad qaday huno guuuuuuuuuuuuuuulaysta
hin daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay gudo xilkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag si wanaaaaaaaaaaag san huno anigana waxaa ka mid ahay dadka ad madax da u tahay ina adeer